Ambongadiny volom-borona boribory lehibe ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy mpanety | Icool
Modely ： IC-70
Size: 7,0 santimetatra
● Ny hety mihety volo miendrika sabatra lancet manana halavirana 7,0 santimetatra dia natao ho an'ny mpanao volo matihanina. Ny hety azo antoka ary mora ampiasaina, samy afaka mampiasa ny lahy sy ny vavy! Ny vy tsy misy fangarony 440c avo lenta no ampiasaina, ary ny lokon'ny hety dia voaravaka fitaratra. Izany no fizarako. , Ny hety azontsika dia afaka mampihena ny volo mikorontana satria tsy misy volo tratra eo anelanelan'ny lelany, izay tsy mitovy amin'ireo mpanao volo hafa eny an-tsena.
● hety miendrika sabatra famolavolana hazomalahelo matihanina. Ny lelan-tsivalana miendrika arc dia mety amin'ny famolavolana volo maina. Izy io dia hety azo ampiasaina ho an'ny mpanao volo mba hanovana. Ny hety dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 440c avo lenta, henjana sy maranitra avo lenta. Ny silaka hety dia mateza ary tsy mora simba. Ny lelan'ny hety dia mandray sisiny mahitsy miendrika sabatra, izay mety ho an'ny mpanety volo hanapaka tsipika, fanapahana teboka ary isa mandritra ny taovolo.
● Ny tànan'olon-droa noforonina araka ny fitsipika ergonomika dia afaka mifanaraka tanteraka amin'ny rantsantanan'olombelona. Mandritra ny fampiasana azy dia azo afindra mihetsika ny lelany, ny ezaka manapaka dia mitahiry ary manampy ny mpanety hamorona aingam-panahy vaovao.
● visy azo ovaina namboarina ary miaraka amina alim-baravarana manitsy, mora ny manitsy ny fihenjanan'ny hety.
Manaraka: Gun-bolo miolaka avo roa heny mihety hety